Anabata anyi n’oge akwukwo mmuta
BANYERE ANY ME AKWUCKWỌ AKW !KWỌ NSỌ!
Afọ iri abụọ anyị nwere ahụmịhe n'ọzụzụ ọkachamara gbanwere ka ọ bụrụ nkuzi vidiyo dị ebube nke kachasị mma na ịma mma maka ihe okike na maka nkọwa teknụzụ.
GỌ N’ THELỌ NCHE A
Kwa ọnwa Musatalent na-edozi usoro ọhụụ, ụdị na usoro ọhụụ na oge na ejiji, ya na ndị nna ukwu kachasị mma na mpaghara ahụ.
Ntụziaka ọzụzụ a nyefere n'aka ndị ọkachamara nwere ọgụgụ isi na ndị na-abụghị ọkachamara, ndị na-ebunye na vidiyo vidiyo ndị a na usoro modul, usoro nzuzo niile nke ngalaba ọkachamara ị kpebiri ịme.
Usoro ahụ na-enye gị ohere ịnweta ọzụzụ ọkachamara ọkachamara kachasị amasị gị site na ịhọrọ ọtụtụ amụma anyị na-enye gị na ntinye ego pere mpe na-enweghị ịhapụ ọzụzụ dị elu. Can nwere ike ịlele ahọrọ ọdịnaya muta ruo mgbe ebighị ebi na-enweghị ndị ọzọ na-eri. Ihe ọmụmụ vidio nke oge a na-esote ọhụụ na ejiji na usoro ọrụ ọhụụ.
Ga-amụta na mfe, ngwa ngwa na-akpali akpali ụzọ!
Na musatalent ugbu a ị nwere ike!
Etu esi azuta
Chọta usoro vidiyo nke dị mma maka gị.
Pịa na bọtịnụ "Buy"
Will ga-abanye na ndenye ọpụpụ ebe ị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na ịbanyela ọrụ gị
Lelee igbe nke ọnọdụ nke ire ere
Pịa na bọtịnụ "Gaa n'ihu PayPal"
Ga-ibugharị ka PayPal saịtị na-eme ka ndị nchebe ịkwụ ụgwọ
Dejupụta nkọwa gị na kaadị nkọwa gị ma kwenye
Pịa Redirect Me bọtịnụ na saịtị ndị ere
Gaa na bọtịnụ profaịlụ gị n'elu aka nri
Họrọ ụzọ gị
Pịa na Start Course
Họrọ modul mbụ ma bido ọzụzụ n'ịntanetị
Ọbịbịa na ịnweta usoro ọmụmụ anyị na-enye maka ịnye "CERTIFICATE" nke nnweta teknụzụ ọkachamara, nke na-egosi ụdị usoro na usoro nke usoro a gara.
A na-enye akwụkwọ ikike nke nnweta ọkachamara ọkachamara na usoro dijitalụ nke enwere ike bipụta na akwụkwọ ma nwee ike iji ya gosipụta nsonye na usoro naanị mgbe ị gafere ule site na ịnweta ngalaba "EXAM".
Enwere ike iji asambodo ahụ rụọ ọrụ, dị ka mgbakwunye na CV, n'ihe banyere ndị nweere onwe ha na-eji ya dị ka aha na-egosi na ọ bụ ọkachamara ha na n'ọnọdụ ọ bụla enwere mkpa maka ịgba akwụkwọ ederede nke usoro ọzụzụ.
Akwụkwọ ahụ bara uru na mpaghara Italiantali na mba ụwa na mba ofesi, nke ndị ọrụ na ndị na-ahụ maka ịma mma n'ọdịnihu na-ezube ịkọwapụta ụdị nke emere na Italy.
Akwụkwọ a ga-enye naanị ndị:
Ha na-enweta site na ịzụta ihe ọmụmụ ma ọ bụ ọtụtụ ọmụmụ (dabere na ọmụmụ)
Ha na-anwale ule ikpeazụ na ntanetị na njedebe nke usoro ahụ
Ha na-anata echiche dị mma site na usoro nyocha banyere nka enwetara
Akwụkwọ nke ikere òkè
Akwụkwọ nke Nsonye bụ nkwupụta nke ihe ọmụma nke Musatalent nyere naanị na igbe nkuzi na usoro DVD, n'ụdị edere wee bụrụ nkwekọrịta nzuzo na-ekwupụta isonye na usoro a họọrọ.
Akwụkwọ nke enyere bụ akwụkwọ na-esote ma gosipụta usoro ọzụzụ niile nke ndị nwere ya na ihe ọmụma teknụzụ enwetara.
Asambodo nke otuto
N'adịghị ka akwụkwọ nke isonye, ​​asambodo ahụ na-ekwe nkwa ụdị na ogo nke nka enwetara ma ọ bụghị naanị isonye na usoro.
Akwụkwọ asambodo a bụ ngwa ọrụ iji gosi ndị ọzọ nwere ikike dị iche iche n'ụzọ zuru oke na n'ụzọ zuru ezu, na -eme ka ọ bụrụ ụzọ dị mma iji mee CV mmadụ ọgaranya.
Asambodo ahụ dị n'ụdị dijitalụ ma ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ghọtara ya, n'oge ọ bụla ị nwere ike ịnweta n'elu ikpo okwu anyị iji bipụta asambodo maka ọrụ ọ bụla.
Ule ule ahụ!
Nweta nyocha nke ntanetị na ịmezu akụkụ niile nke ule ahụ na-enye gị ohere ịnata na usoro dijitalụ na profaịlụ onwe gị (nke ị nwere ike ibipụta na ụlọ ahịa a tụkwasịrị obi) "Akwụkwọ" nke ọdịdị onwe sitere na Musatalent nke gosipụtara nkà na ụzụ akọwara na vidiyo a zụtara, ego nyocha a ga-akwụ ga-enye gị ohere ịnweta nyocha ịntanetị ma nata "Asambodo". Ọ bụrụ na ịzụta ngwungwu zuru oke nke nkuzi vidiyo nwere aha "Kachasị mma" gụnyere njikọta akọwara nke usoro ndị ọzọ, asambodo enyere ga-egosi akara zuru ezu (ịmaatụ: na "Make-up Artist advanced larịị") ọkachamara na usoro niile gụnyere ma kọwaa na igbe ahụ ma ọ bụghị naanị nke usoro dịka edebere maka ịzụta nke vidiyo ọ bụla.
Examgafe ule ntanetị, nke enwere ike ịme 2 ugboro, na-enye gị ohere ịnweta "Asambodo" (dị ka akọwara n'elu), ọ bụrụ na ị gafere ule 2, ị nwere ike zụta ule ahụ maka usoro gị ma gị onwe ha ga-enwe 2 mgbalị ndị ọzọ gafere n’ule ma nweta akwụkwọ dijitalụ.
Esi lee ule
Pịa na akwụkwọ nyocha maka usoro gị
A na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na akpaghị aka
Zaa ajụjụ niile
Na njedebe pịa "zuru"
Wepụ modulu ndị ahụ site na ịpị X n'elu aka nri
Pịa na bọtịnụ "Finish Course"
Emechara “Asambodo” gị
Pịa na bọtịnụ "Asambodo"
Ibudata ma bipụta ya na mmasị gị
Professionaltali ọkachamara ndị Italy!
Chọpụta ụlọ ahịa ahụ
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbụ Ọkachamara zuru oke ị nwekwara ike ịnwe ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị nke ngwaahịa na ngwa ọrụ aka gị ebe a ga-anabata gị site na nkwalite na nkwụnye ego echebere naanị maka ụmụ akwụkwọ anyị na ndị ọkachamara n'ọdịnihu site na ọrụ nke kaadị VIP na njirimara ebighi ebi ( chọpụta banyere saịtị ahụ)
Musatalent na-eji ma na-enye na SHOP STUDIOS ngwaahịa ịchọ mma ọkachamara nke Phitofarma srl ​​laboratories, onye isi ụlọ ọrụ Italiantali na -emepụta na ikesa ihe ịchọ mma na ọkachamara ọkachamara emere na Italytali.
Emepụtara ngwaahịa na ngwa STUDIOS iji nye ndị ọkachamara na mpaghara ahụ ngwa ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na asọmpi asọmpi dị elu ma e jiri ya tụnyere asọmpi ahụ, na-ekwe nkwa ịdị mma na ihe ọhụrụ. Emepụtara ya ka ejiri ya mee ihe na ihe nkiri, usoro mgbasa ozi, ihe ngosi ejiji, egwu egwu, ihe nkiri, ọkachamara ndị ọkachamara, ha bụ ezigbo ndị dị mkpa na ndị dị mkpa maka ndị chọrọ ịbụ onye omenkà etemeete mara mma, na-enye gị ọkachamara na ọkwa kachasị elu ọbụlagodi n'iji ngwaahịa.
Ngwaahịa a bụ ISO na HALAL gbaara, jiri naanị akụrụngwa dị mma ma jiri usoro ọgbara ọhụrụ na ndị ọrụ ruru eru na ndị ọkachamara.
Anyị na-eji asambodo:
Daalụ maka ịhọrọ anyị ma nabata MUSATALENT.